Miverina an-tserasera i El Víbora ary maimaimpoana miaraka amin'ny tantarany efa lehibe | Famoronana an-tserasera
Ny herinandro lasa teo dia tonga ny vaovao fa Nahagaga fa niverina ilay Viper amin'izao andro mihazona izao. Izahay dia miresaka momba ny fiverenan'ilay gazety tranainy indrindra amin'ny gazety rehetra ao amin'ilay antsoina hoe «comom boom-boho» lehibe tany Espana.
Miresaka momba ny famoahana iray izay nihoatra ny fotoana sasany tamin'ny alakamisy ary miresaka momba ny magazine isika amin'ny fotoana tsy nisian'ny Internet, noho izany ny fidirana amin'ity karazana atiny sy ny ambanin'ny tany hafa ity dia tena sarotra raha tsy ho azy ireo.
Amin'ny 6 aprily avy amin'ny bilaogin'i Nanambara ny fahatongavan'i El Víbora ilay dome ary ny famoahana maimaimpoana voalohany novakiana an-tserasera. Raha ny marina, omaly alarobia, napetraka an-tserasera indray ny olana faharoa hankafizany ireo tantarany hooligan ary ahitantsika mpanakanto ambanin'ny tany izay tsy afaka niseho tamin'ny sehatra editorial hafa.
Miresaka momba ny gazety iray nanana azy io isika Isa 300 ary izany dia nanomboka tamin'ny 1979 ka hatramin'ny 2004. Taona vitsivitsy tao amin'ny mpamaky dia afaka nankafy ny votoatiny hafahafa, hedonista, libertine ary mitsikera. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miaraka amin'ny fahalalahana lehibe dia afaka nikasika ny lohahevitra rehetra mety ho azon'ny devoly amin'ny alàlan'ny eritreritra puritika tamin'izany fotoana izany izy.
Ny Víbora dia niverina tamin'ny isa nomerika tamin'ny alàlan'ny fandefasana isan-kerinandro anay hampifalifaly amin'izao andro fitanana izao ho an'ny coronavirus. Azonao atao ny mamaky ny laharana voalohany avy amin'ity rohy ity, ary ny faharoa nanomboka omaly avy amin'ity iray hafa ity.
Famoahana iray tena manokana ary atolotray anao eto ho an'ny atiny manokana sy olon-dehibe. Ny hatsaran'ny sary, fifanakalozan-kevitra ary ny kalitaon'ny tantara toy ny tsy misy. Tsy ianao koa malahelo ny famoahana an'i Roca izay anomezany ny iray amin'ireo sary an-tsary mampiavaka azy tsara indrindra mandritra ny andro fahantrana amin'ny fotoana maro. Aza mandany fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Miverina indray i El Víbora amin'ity vanim-potoana voan'ny coronavirus ity miaraka amin'ireo isa tsy misy tambiny an-tserasera